Kunze Umbrellas Musika Kuvandudza, Maitiro, Makiyi Akaitiswa Factors, Segmentation Uye Forecast kuna 2020-2026
The Outdoor Umbrellas Maketi yakafundwa zvakawandisa nevanyori vechiratidzo ichi yakanyanya kutarisa pamusoro pevatengesi mamiriro, kuwedzera dunhu, kutungamira zvikamu, kusimuka maitiro uye mikana yakakosha, uye zvimwe zvidzidzo zvakakosha. Chirevo chinoratidzira zvinhu zvine simba zvichisimbisa chinodiwa mu Outdo ...
Ini ndakasanganisirawo amburera ine yakavakirwa-inch.
Kazhinji kutaura, zuva riri pamhenderekedzo rinofanirwa kuve zuva rekuzorora uye mufaro muzuva, kwete zuva rekumanikidzwa nekuti amburera inoramba ichibhururuka ichienda kure. Neraki, iwo akanakisa emahombekara ezvikepe ari nyore kuisa uye akaedzwa nevatengi nguva nenguva kuti agare munzvimbo kunyange kana t ...
Chic, Yakamira Umbrellas Iyo Inichava Newe Kuimba Mumvura
Kunonaya, kuri kunaya kitsi uye imbwa, mhepo yemhepo yaridza amburera yako mukati, uye zvino wanyudzwa. Kunyangwe iri nguva yechando inonaya mvura kana inodziya yezhizha mvura, iwe unozoda amburera iyo iwe yaunogona kuvimba nayo kuti uchengetedze muviri wako. Kana iwe wakaita seiyo ...
na admin on 20-03-05
takapinda kutengeserana kwakanaka muSouth Africa munaGunyana 2019, tichiratidza chigadzirwa chedu ipapo, zvinhu zvedu zvakagamuchirwa nevanhu veko.
Vatengi vepasi rese kubva kuSpain vakashanyira kambani yedu yekumberi bhizinesi kukurukura muna Zvita 2019, Isu tine chivimbo chekuti kambani yedu ichavashandira zviri nani muna 2020.